रामेछापमा एकसय भन्दा वढी स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उपचार प्रभावित
२०७२ फाल्गुण १८ मंगलबार, रामेछाप। रामेछापका अधिकासं ग्रामिण भेगमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुमा दरवन्दी अनुसारको स्वास्थ्य कर्मीहरु नहुँदा सेवाग्राहीहरुले स्वास्थ्य संस्थावाट सहजरुपमा उपचार सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीहरुले बताएका छन्। ग्रामिण भेगमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरुमा दरवन्दी खाली भएको पुरा एक वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म खाली दरवन्दी परपूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरुले उपचार सेवा सहज रुपमा लिन नपाएका हुन्। जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरु पटक पटक सरुव ... बाँकी अंश»
सेक्स अगाडि यी चीजहरु खानु हानिकारक
२०७२ फाल्गुण १८ मंगलबार, एजेन्सी। विश्वभर सेक्स सधैं एक कौतुहलताको विषय बन्दै आएको छ । सेक्स जीवन सुखमय बनाउने नाममा मानिसहरु जानिनजानी कतिपय अवस्थामा ‘गलत’ तरिका रोज्न पुग्छन्, जसले मानिसको जीवनमै असर पर्न जान्छ । राम्रो यौन जीवनका लागि खाद्य पदार्थ (डाइट)को पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । जसरी केही डाइटहरुले मानिसको कामोत्तेजना बढाउँछन् भने केही तत्वहरु छन्, जसले मानिसको कामोत्तेजना ह्रास गर्छन् । यौन सम्बन्ध अगाडि यी तत्वहरुको सेवनले मानिसको ‘परर्फमेन्स’ ... बाँकी अंश»
फलफूल सेवनले महिलाहरुको जवानी कायम राख्छ: अध्ययन
२०७२ फाल्गुण १७ सोमबार, एजेन्सी। महिलाले जवानीमा धेरै मात्रामा फलफूल, सब्जी वा शाकाहारी खाना खाएमा उनी बुढि हुदा पनि स्वस्थ रहने एक अध्ययनले देखाएको छ।अध्ययनले भनेको छ फलफूल, सब्जी वा शाकाहारी खानाले महिलाको स्वास्थ्यमा विशेष प्रभाव राख्दछ तर पुरुषमा भने यसले खासै महत्व राख्दैन। यस बिषयलाई लिएर वैज्ञानिकहरु चिन्तित देखिएका छन्। अमेरिकाको कोरोनरी आर्टिलरी रिस्क डेभ्लोप्मेन्टको रिसर्चका अनुसार महिलाले युवा अवस्थामा फलफूल, सब्जी अवथा शाकाहारी खाना खानाले उनीहरु ... बाँकी अंश»
जवानै रहन सातामा चारपटक यौन आवश्यक
२०७२ फाल्गुण १६ आइतबार, एजेन्सी। हालै गरिएको एउटा सेक्स्युअल हेल्थ सर्भेका अनुसार अधिकांश महिला यौन आनन्द लिदैनन्। यो सर्भेका अनुसार महिलाहरु यौन आनन्दका लागि होइन, उनीहरुका लागि यो एउटा ‘सम्झौता’ हुने गरेको छ। हेल्दी विमेन नामक संगठनले १ हजार ३१ महिलाको सेक्ससँग सम्बन्धित व्यवहारको अध्ययन गरेको थियो। सर्भेमा महिलाहरु सेक्सबाट हुने फाइदाका बारेमा अनजान रहेको पाइयो। ५१ प्रतिशत महिलाले थाहा थियो कि सातामा कहिलेकाहिँ गरिने सेक्स स्वास्थ्यका लागि उत्तम हो। केव ... बाँकी अंश»
'कण्डम नलगाइ यौन सम्पर्क गर्न महिलाहरु इच्छुक'
२०७२ फाल्गुण १५ शनिबार, एजेन्सी। सुरक्षित यौन सम्पर्क र गर्भ निरोधका लागि कण्डम प्रयोग गरिने भएपनि महिलाहरुले भने वाध्यतावश मात्र कण्डम लगाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनका अनुसार महिलाहरुले कण्डोम लगाएर यौन सम्पर्क गर्न इच्छा नदेखाउने गरेको देखिएको छ। अध्ययनका लागि गरिएको सर्वेमा महिलाहरुको यस्तो अनिच्छा देखिएको हो। सर्वेमा धेरैजसो महिलाहरुले यौन सम्पर्कको समयमा कण्डोम प्रयोग गर्न मन नपराउने बताएका थिए। उनीहरुले सुरक्षा र गर्भनिरोध जस्ता वाध्यताको ... बाँकी अंश»
तेत्तिस प्रतिशत महिला ब्लू फिल्म हेर्छन्, पोर्न स्टारमा यौन रोग हुँदैन !
२०७२ फाल्गुण १४ शुक्रबार, एजेन्सी। पोर्न फिल्म वा पोर्न वेबसाईटको प्रयोग विश्वमा दिनानुदिन बढ्ने क्रम जारी छ। विश्वमा हरेक समयमा कम्तिमा ३० हजार मानिस पोर्न फिल्म या पोर्न वेबसाईट हेरिरहेका हुन्छन्। यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै पोर्न उद्योगले हरेक ३९ मिनेटमा एक नयाँ पोर्न भिडियो वेबसाईटमा अपलोड गर्ने गर्छ। यु–ट्युवको ‘नम्बर १०’ च्यानलका अनुसार विश्वमा २० प्रतिशत पुरुष आफ्नो कामको समयमा ‘पोर्न’ हेर्ने गर्छन् । त्यस्तै विश्वमा इन्टरनेटमा पोर्न हेर्नेहरु म ... बाँकी अंश»
यौनकक्ष वास्तु प्रतिकुल छ भने यौन जीवनमा असन्तुष्टि
२०७२ फाल्गुण १३ बिहिबार, काठमाडौ। तपाईको यौन जीवनलाई वास्तुले असर पार्दछ भन्दा अनौठो लाग्ला तर कुरा सहि हो । जसरी तपाईको धन, शिक्षा, स्वास्थ्यमा वास्तुको असर पर्दछ, त्यस्तै यौनजीवनमा पनि प्रभाव पर्दछ । यदि तपाइको यौनकक्ष वास्तु प्रतिकुल छ भने तपाईले यौन जीवनमा कहिल्यै पनि चरम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्नु हुँदैन । किनकि, वास्तुले जुन ऊर्जाको व्याख्या गर्दछ त्यही ऊर्जा तपाईको पनि हुन्छ । सूर्यको ऊर्जा सकारात्मक र चन्द्रमाको ऊर्जा नकारात्मक हुन्छ । सूर्य भनेको पुरुष र ... बाँकी अंश»
कस्तो यौन मिलनलाई शिवशक्ति मिलन भनिन्छ?
२०७२ फाल्गुण १२ बुधबार, काठमाडौं । यौन जीवनमा चरम सुख प्राप्त गर्ने महान् रहस्यमाथि महर्षि वात्स्यायान, मेरी स्टोप्स, मनोचिकित्सक एडलर, युंग आदि रति विशेषज्ञ वैज्ञानिकहरूले आफ्नो अनवरत अध्ययन, सूक्ष्मातिसूक्ष्म शारीरिक एवं मानसिक जाँच, प्रत्यक्ष परीक्षण एवं अनुसन्धान गर्नलाई कुनै कसुर छाडेका छैनन्। यी मनोवैज्ञानिक (Psychological) र वैज्ञानिक (Scientific) अनुसन्धानपछि जुन बहुमूल्य तथ्यपूर्ण अनुभव र गुप्त रहस्य उपलब्ध भएका छन्, त्यसलाई त आधुनिक वैज्ञानिकहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण वि ... बाँकी अंश»
ज्योतिषशास्त्र अनुसार यौन रोग र हस्तमैथुन गर्ने बानी कसरी, किन हुन्छ ? जान्नुस्
२०७२ फाल्गुण ११ मंगलबार, काठमाडौ । जसै कुनै वर-कन्याको विवाहको बारेमा कुरा चल्दछ त यिनीहरू दुवैको मनमा स्वाभाविक रूपले नै उत्सुकता जाग्दछ कि जीवनसाथी कस्तो होला, उसको रङ, रूप, शारीरिक गठन, स्वभाव, विद्या धन-वैभव इत्यादि कस्तो होला ? यी सबै जिज्ञासाका बारेमा त प्रायः वर-कन्याका मातापिताले नै जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निभाएका हुन्छन् । अतः यी साधारण प्रश्न नै हुन् । तर स्मरण रहोस्, शारीरिक गठन (जसमा गुप्ताङ्ग पनि सम्मिलित छ) मा अङ्गको ठूलो-सानो, पुष्ट-अपुष्ट हुनु इत्य ... बाँकी अंश»
२०७२ फाल्गुण १० सोमबार, एजेन्सी। दाँतमा पहेलोपनले तपार्इको सुन्दरतामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ। राम्रो, सेतो अनि सफा दाँतले तपाईको स्वास्थ्य मात्र हैन व्यक्तित्वमा पनि आकर्षण प्रदान गर्छ। यदि तपाइको पनि सेतो दाँत छैन र जति सफा गरे पनि दाँत सेतो र चम्किलो हुँदैन भने अब यसो गर्नुहोस। आफ्नो दाँतलाई सेतो अनि चम्किलो बनाउन घरेलु तरीकाबाट पनि यो सम्भव छ। यसको लागि हामीले दैनिक प्रयोग हुने कागतीको एक उत्तम उपाय हुन सक्छ। दिनहुँ २ पटक ब्रश गर्नुहोस। ब्रश गरिसक ... बाँकी अंश»
मोटोपनाले सेक्स जिवनमा कस्तो असर पार्ला !
२०७२ फाल्गुण ९ आइतबार, एजेन्जी। मोटोपना आरमदायि जीवन शैलीको ठूलो बाधक हो।मोटोपनाले हाम्रो जिवनको शारीरिक तथा मानसिक दुवै प्रकारको काममा असर गर्ने गर्दछ।मोटोपनाबाट शारीरिक र मानसिक प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा तपाई हामीलाई ज्ञान नै होला तर यसले हाम्रो सेक्स जीवनमा पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्छ भने कुरा तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। संसारमा सामान्य भन्दा अधिक तौल भएका मानिसको संख्या करोडोमा छ। त्यसैले मोटोपना र सेक्समा हुने यो प्रभावको बारेमा केही तथ्य जानौँ। मोटोपनालेक ... बाँकी अंश»
यी १० खानेकुराले पुरुषको प्रजनन र यौन क्षमता बृद्धि गर्छ
२०७२ फाल्गुण ७ शुक्रबार, काठमाडौं । घरमा नयाँ सन्तान भित्रिनका लागि जति महिलाको प्रजनन क्षमता मजबुत हुन जरुरी छ, त्यतिक्कै मजबुत पुरुषको प्रजनन क्षमता (फर्टिलिटी) पनि हुन जरुरी छ । यदी खानेकुरामा यी १० चीजहरु भएको खण्डमा पुरुषको प्रजजन क्षमतामा बृद्धि हुन्छ । लसुनः लसुनमा भिटामिन ‘बी–६’ हुने कारणले यसले पुरुषको प्रजजन क्षमता बढाउन धेरै मद्दत गर्छ । अनारः अनारले रातो रक्तकोष मात्रै बढाउने काम गर्दैन, यो प्रजजन क्षमता बृद्धि गर्न पनि फाइदाजनक हुन्छ । अना ... बाँकी अंश»
दुर्गम बस्तीहरुमा पूर्ण स्तनपान गर्ने बढे
२०७२ फाल्गुण ६ बिहिबार, सुदूरपश्चिमको हिमाली जिल्ला बझाङका दुर्गम बस्तीहरुमा पूर्ण स्तनपान गर्नेको संख्या उल्लेख्य बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार दुई बर्षको अबधीमा ६० प्रतिशतबाट बढेर ९० प्रतिशत पुगेको हो । बालबालिकाको कुपोषणको लागि जोखिम मानिने यस जिल्लामा पूर्ण स्तनपान नगराउनु पनि एक सूचकका रहेको थियो । जिल्लाको पोषणको स्थिति सुधार गर्नका लागि बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सस्थाहरुको पहलबाट यसको प्रतिशत बढेक ... बाँकी अंश»
जीवन सुखी बनाउन सेक्स कलाका केही टिप्सहरु
२०७२ फाल्गुण ४ मंगलबार, एजेन्सी। सेक्स पति पत्नी बिचमा अनिवार्य आवश्यक्ता हो । जीवन सुखी बनाउन सेक्स जीवनमा रमाउनु जरुरी रहेको छ । तर हाम्रो समाजमा अनैतिक सेक्सका कारण समस्याहरु थपिएका छन् । त कतिपय अवस्थामा सेक्सका सामान्य ज्ञान समेत नजान्दा पतिपत्नी बिचमा असमझदारी बढ्दै पारपाचुके सम्म भएका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गएका छन् । सेक्सलाई स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो मानिन्छ तर यो जान्न आवश्यक छ कि सेक्समा आन्नद लिन सहि तरिका अपनाउनु जरुरी छ । तपाई सेक्सका साधारण टिप्स अपना ... बाँकी अंश»
कोशी अञ्चल अस्पताललाई क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकास गर्नै
२०७२ फाल्गुण ३ सोमबार, विराटनगर । स्वास्थ्यमन्त्री रामजन्म चौधरीले विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पताललाई क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकासगर्न मन्त्रालय क्रियाशिल भएर लागी रहेको बताएका छन् । अस्पतालको अनुगमन एंव निरिक्षणपछी आइतवार आयोजित छलफल कार्यक्रममा वोल्दै मन्त्री चौधरीले लामो समयदेखी अन्चल अस्पतालको रुपमा रहेको कोशी अन्चल अस्पतालाइ क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा विकासगर्न भोलीदेखीनै आफनो मन्त्रालयले प्रक्रिया शूरुगर्नै बताए । पुर्वाञ्चलको सवैभ ... बाँकी अंश»
लागु पदार्थ छोड्न चाहनुहुन्छ ? सेक्स गर्नुहोस !
२०७२ फाल्गुण १ शनिबार, एजेन्सी । यौनसम्बन्धी क्रियाकलाप जस्तै पोर्न साइट हेर्ने बानी भएका व्यक्तिलाई चेन स्मोकरलाई जस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन जारी रहेको छ। क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताहरूले पोर्न भिडियो हेरि रहने १९ जना मानिसको दिमागको अध्ययन गरेका छन्। यौनको लत भएका व्यक्ति र लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको दिमागमा उल्लेखनीय समानता पाइएको छ। यी दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्धबारे पहिलो अध्ययन भएको हो । अध्ययनका क्रममा पोर्न हेरेको समयमा द ... बाँकी अंश»
सरकारी कार्यालयको हातामै चुरोटसुर्ती
२०७२ माघ २८ बिहिबार, भक्तपुर। सरकारले कुनै पनि सार्वजनिकस्थलको २०० मिटर वरपर चुरोट सुर्ती लगायत धूमपानजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाए पनि यहाँका नियमन निकायमै खुला रुपमा यस्ता सामग्री पाइन्छ । नियमन निकायका रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिविस र जिल्ला अदालतको खाजाघरमै खुला रुपमा चुरोट तथा सुर्तीको खुलमखुल्ला बिक्री एवम् सेवन गरिएको सेवाग्राहीको गुनासो आउँदा पनि ती निकायले बेवास्ता गरेका छन् । सार्वजनिक निकायको १० देखि २० मिटरको दूरीमा नै सरकार ... बाँकी अंश»
सेक्स गर्दागर्दै ‘हर्टअट्याक’ हुन सक्छः अध्ययन
२०७२ माघ २८ बिहिबार, एजेन्सी। यौन सम्बन्धबाट नचाहँदा–नचाहँदै गर्भ रहने खतरा त छँदै नै छ, अर्को एक खतरा पनि देखिएको छ, त्यो हो–मुटुमा पर्ने असर । समाचार एजेन्सी बीबीसीका अनुसार शोधकर्ताको भनाई छ कि शारीरिक सम्बन्धका समयमा समेत मुटुमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । शोधकर्ताले ४५ जना मानिसमा मुटुमा हुने समस्या मध्ये १ जना मानिसमा यस्तो समस्या यौन सम्बन्ध कायम गरिरहेको समयमा हुने पाएको जनाइएको छ । त्यस्तै समाचारमा भनिएको छ कि फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति फेलिक्स र कम्ति ... बाँकी अंश»
ग्यास्ट्रिक हुनेहरुले अपनाउनुस यि घरेलु उपाय
२०७२ माघ २८ बिहिबार, काठमाडौं। ग्यास्ट्रीक नहुने नेपाली पाउन हम्मे हम्मे छ। नेपालीहरुको एउटा पहिचान ग्यास्ट्रिक भएको कुरा हामीबीचमा हुने पनि गर्छ। खानपिनको समय नमिल्नु, अमिलो पिरो चिल्लो खानेकुरा खानु लगायत धेरै कारणले ग्यास्ट्रिक हुने गरेको छ। पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने लगायतका लक्षणलाई नै ग्यास्ट्रिक भन्ने गरिन्छ। ग्यास्ट्रिक भएकाहरुलाई वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने, ढ्याउ ढ्याउ आउनु, वान्तामा रगत देखिने, कालो दिसा आउने, खाना नपच्ने, तौल कम हुने, छाती र पेट ... बाँकी अंश»
सेक्स पछि किन सुत्छन पुरुष? रोचक तथ्य!
२०७२ माघ २५ सोमबार, एजेन्सी। यहाँहरु सबैले सुन्नु भएकै हुनु पर्छ प्राय गरेर स्त्रीहरु आफ्नो पुरुषसँग यौनकृया गरे पछि गुनासो गर्ने गर्छन् किनभने यौन कार्य गरे लगतै प्राय पुरुषहरु निन्द्रामा पर्ने गर्दछन्।त्यसबेला स्त्रीहरु आफ्नो साथीलाई कुनै रोग लागेको छ भन्ने अनुमान गर्दछन्। तर उनीहरुको उक्त निदाउने बानीमा भने डराउनु पर्ने छैन। किनभने सबै पुरुषहरु सेक्स पछि निदाउने गर्दछन्। यस्तो किन हुन्छ भनेर तपाइहरुले सोच्नु भएको होला ? यौनकृया पछि पुरुषहरुमा आकसीटोसी ... बाँकी अंश»